FAHASAMIHAFANA EO AMIN'NY HOTMAIL.COM, MSN.COM, LIVE.COM & OUTLOOK.COM? - MALEMY
Inona no mahasamihafa ny Hotmail.com, Msn.com, Live.com & Outlook.com?
Misavoritaka ve ianao eo amin'ny Hotmail.com, Msn.com, Live.com, ary ny Outlook.com? Manontany tena ianao hoe iza izy ireo ary inona no mahasamihafa azy ireo? Eny, efa nanandrana nanatratra izany ve ianao www.hotmail.com ? Raha nanao izany ianao, dia ho voatarika mankany amin'ny pejy fidirana Outlook. Izany dia satria i Hotmail, raha ny marina, dia naverina nantsoina indray ho any Outlook. Ka amin'ny ankapobeny, Hotmail.com, Msn.com, Live.com, ary Outlook.com dia samy miresaka momba ny serivisy webmail mitovy na mihoatra na latsaka. Hatramin'ny nahazoan'ny Hotmail an'i Microsoft dia nanova ny anarana ny serivisy imbetsaka izy io, ary very hevitra tanteraka ny mpampiasa azy. Toy izao ny lalan'ny Hotmail nankany Outlook:
OUTLOOK.COM, OUTLOOK MAIL ARY (OFFICE) OUTLOOK
WEI CLIENT amin'ny mailaka
Ny iray amin'ireo serivisy mailaka voalohany, fantatra amin'ny anarana hoe Hotmail, dia natsangana ary natomboka tamin'ny taona 1996. Hotmail dia noforonina sy namboarina tamin'ny alàlan'ny HTML (HyperText Markup Language) ary, noho izany, dia nantsoina hoe HoTMaiL (jereo ny sora-baventy). Io dia namela ny mpampiasa hiditra amin'ny boaty fidiny avy taiza ary noho izany dia nanafaka ireo mpampiasa tamin'ny mailaka miorina amin'ny ISP. Nanjary nalaza io tao anatin'ny herintaona monja taorian'ny nanombohany.
Nahazo an'i Hotmail i Microsoft tamin'ny taona 1997 ary niditra tao amin'ny serivisy Internet an'ny Microsoft, fantatra amin'ny anarana hoe MSN (Microsoft Network). Avy eo, nantsoina hoe MSN Hotmail indray i Hotmail, raha mbola malaza amin'ny anarana hoe Hotmail izy. Ny Microsoft dia nampifandray azy io tamin'ny Microsoft Passport (ankehitriny Kaonty Microsoft ) ary natambatra bebe kokoa tamin'ny serivisy hafa ambanin'ny MSN toy ny MSN messenger (fandefasan-kafatra eo no ho eo) sy ny habaka MSN.
Tamin'ny 2005-2006, nanambara marika vaovao i Microsoft ho an'ny ankamaroan'ny serivisy MSN, izany hoe, Windows Live. Nikasa ny hanome ny anarana hoe MSN Hotmail ho Windows Live Mail i Microsoft tamin'ny voalohany fa ny testameta beta kosa dia naniry ilay anarana malaza hoe Hotmail. Vokatr'izany, MSN Hotmail dia nanjary Windows Live Hotmail teo amin'ireo serivisy MSN hafa. Ny serivisy dia nifantoka tamin'ny fanatsarana ny hafainganana, ny fampitomboana ny habaka fitahirizana, ny traikefan'ny mpampiasa tsara kokoa ary ny fiasa azo ampiasaina. Taty aoriana, noforonina indray i Hotmail mba hanampiana fiasa vaovao toy ny Sokajy, Hetsika Instant, ny famafana ny fandaharana, sns.
Nanomboka tamin'izay, ny marika MSN dia nanova ny fifantohany voalohany amin'ny atiny an-tserasera toy ny vaovao, toetr'andro, fanatanjahan-tena ary fialamboly, izay natao tamin'ny alàlan'ny vavahadin-tranonkala msn.com sy ny Windows Live nandrakotra ny serivisy an-tserasera Microsoft rehetra. Ireo mpampiasa taloha izay mbola tsy nanavao ity serivisy vaovao ity dia mbola afaka miditra amin'ny interface MSN Hotmail.
Tamin'ny 2012, najanona ny marika Windows Live. Ny sasany amin'ireo serivisy dia nantsoina tsy miankina ary ny sasany nampidirina tao amin'ny Windows OS ho fampiharana sy serivisy. Hatramin'izao, ny serivisy fandefasana mailaka, na dia niova anarana imbetsaka aza izy, dia fantatra amin'ny anarana hoe Hotmail fa taorian'ny fampiatoana ny Windows Live dia lasa Outlook ihany i Hotmail. Ny fomba fijery no anarana iantsoana ny mailaka Microsoft web dia fantatra ankehitriny.
Ankehitriny, outlook.com dia serivisy webmail ofisialy azonao ampiasaina amin'ny adiresy mailaka Microsoft anao, na mailaka outlook.com na Hotmail.com, msn.com na live.com efa niasa teo aloha. Mariho fa raha mbola afaka miditra amin'ireo kaonty mailaka taloha ianao ao amin'ny Hotmail.com, Live.com, na Msn.com, ireo kaonty vaovao dia azo atao kaonty outlook.com ihany.
Ka io no nanovan'ny Hotmail ho MSN Hotmail, avy eo Windows Live Hotmail ary avy eo lasa Outlook. Niteraka fisafotofotoana teo amin'ireo mpampiasa izany famerenana sy fanovana anarana nomen'ny Microsoft azy rehetra. Ankehitriny, fa manana ny Hotmail.com, Msn.com, Live.com, ary ny Outlook.com mazava isika, mbola misy fisavoritahana iray sisa. Inona marina no tiana holazaina amin'ny hoe Outlook? Talohan'izay rehefa nilaza izahay Hotmail, fantatry ny hafa izay noresahinay fa ankehitriny taorian'ny fanovana anarana rehetra dia mahita vokatra na serivisy maro samihafa mifamatotra amin'ny anarana mahazatra 'Outlook' izahay.
Alohan'ny hanatrehantsika ny fahafantarana ny fahasamihafan'ny Outlook.com, ny Outlook Mail ary ny Outlook dia hiresaka momba ireo zavatra roa samy hafa tanteraka isika: mpanjifa mailaka amin'ny Internet (na fampiharana web) ary mpanjifa mailaka Desktop. Ireo no fomba roa azo atao ahafahanao miditra amin'ny mailakao.
Mampiasa mpanjifa mailaka Internet ianao isaky ny miditra amin'ny kaonty mailakao amin'ny tranokala (toy ny Chrome, Firefox, Internet Explorer, sns.). Ohatra, miditra ao amin'ny kaontinao amin'ny outlook.com ianao amin'ny Internet rehetra. Tsy mila programa manokana ianao amin'ny fidirana amin'ny mailakao amin'ny alàlan'ny mpanjifa mailaka amin'ny Internet. Ny hany ilainao dia fitaovana (toy ny solosainao na solosainao findainy) sy fifandraisana Internet. Mariho fa rehefa miditra amin'ny mailakao amin'ny alàlan'ny tranokala finday amin'ny findainao ianao dia mampiasa client email mailaka indray.
Etsy ankilany, mampiasa mpanjifa mailaka birao ianao rehefa mandefa programa hahazoana ny mailakao. Azonao atao ny mampiasa ity programa ity amin'ny solosainao na amin'ny findainao (raha izany dia fampiharana mailaka finday izy io). Raha atao teny hafa, ny programa manokana ampiasainao hidirana manokana ny kaonty mailakao dia ny mpanjifanao mailaka amin'ny birao.
Ankehitriny, tsy maintsy manontany tena ianao hoe maninona isika no miresaka momba ireo karazana mpanjifa mailaka roa ireo. Raha ny marina dia io no mampiavaka ny Outlook.com, ny Outlook Mail ary ny Outlook. Manomboka amin'ny Outlook.com, dia miresaka momba ny mpanjifan'ny mailaka web an'ny Microsoft ankehitriny, izay Hotmail.com teo aloha. Tamin'ny 2015, Microsoft dia nandefa ny Outlook Web App (na OWA), izay 'Outlook amin'ny Internet' ankehitriny ao anatin'ny Office 365. Nahitana serivisy efatra manaraka ireto: Outlook Mail, Outlook Calendar, Outlook People and Outlook Tasks. Amin'ireny, ny Outlook Mail dia ny mpanjifan'ny mailaka web ampiasainao amin'ny fidirana amin'ny mailakao. Azonao atao ny mampiasa azy raha misoratra anarana amin'ny Office 365 ianao na raha manana fidirana amin'ny Exchange Server. Ny Outlook Mail, amin'ny teny hafa, dia soloina ny interface Hotmail nampiasanao teo aloha. Farany, antsoina hoe Outlook na Microsoft Outlook na indraindray, Office Outlook ny mpanjifan'ny mailaka birao an'ny Microsoft. Izy io dia ampahany amin'ny Microsoft Outlook hatramin'ny Office 95 ary misy ny fiasa toa ny kalandrie, ny manager manager ary ny fitantanana ny lahasa. Mariho fa Microsoft Outlook dia misy ihany koa ho an'ny telefaona finday sy takelaka misy rafitra fiasan'ny Android na iOS ary ho an'ny kinova kely amin'ny telefaona Windows.
Ka izay izany. Manantena izahay fa efa voavaha izao ny fisafotofotoana rehetra mifandraika amin'ny Hotmail sy Outlook ary azonao tsara ny zava-drehetra.
google chrome tsy misy feo windows 10
ny hafainganam-pandehan'ny kapako mafy
mpanonta diso ny fanjakana
Windows 10 vaovao farany amin'ny 99
tsy afaka mifandray amin'ny fanavaozana ny windows
tsy hita ny kisary wifi windows 7
raikitra amin'ny efijery fidirana windows 10